ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နှင့်လာရောက်လည်ပတ်ဘို့ကျေးဇူးတင်စကားမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ site အားလုံးရထားဘီးပေါ်မှာရှိသမျှအကြောင်း, ပိုပြီးတိတိကျကျပြော, စက်တပ်ရထားဘီး! အကြှနျုပျတို့သညျမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်အလွန်အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်ပေးကမ်းပေါ်စီစဉျ.
ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်အာရုံစိုက်ကြလိမ့်မည်တစ်ခုမှာအရာအသုံးအများဆုံးမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူနိုင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ထရပ်ကားရဲ့ရှိမရှိ, မော်တော်ဆိုင်ကယ်, ATV သို့မဟုတ် RV နှင့်မည်သို့အကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးရန်. တစ်ဦးကိုအသုံးပြုမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူတဲ့အခါတော်တော်များများအားလုံးအတူတူပင်အမှုအရာအထက်ဖော်ပြထားသောမော်တော်ယာဉ်များအားလုံးလျှောက်ထား, RV ရဲ့ဖြင့်သင်တို့ကိုစစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အနည်းငယ်ပိုပြီးအမှုအရာဖြစ်မည်အကြောင်းနေစဉ်.
သင်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ထရပ်ကား purchasing အတွက်ယူသင့်တယ်တော်တော်များများခြေလှမ်းတွေရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့အိမ်စာစားသုံးသူကားတစ်စီးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်စားသုံးသူကားတစ်စီးအစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ပါသလား. ကွဲပြားခြားနားသောကားမော်ဒယ်များနှင့် ပတ်သက်. သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်လူများနှင့်မိတ်ဆွေများကမေးပါ. သငျသညျဝယ်စိတ်ဝင်စားဓာတ်ငွေ့လုပ်၏စားသုံးမှုနှင့်မော်ဒယ်ပေါ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း. အသီးအသီးကားတစ်စီး၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးနှင့် costs.Most ကလူတစ်ဦးအသုံးအများဆုံးမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ဖို့အန်စာတုံးကိုလှိမ့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ကွောငျးသိရတွက်ချက်. သို့သော်, တစ်ဦးကိုအသုံးပြုကားတစ်စီးစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း၏ခြေလှမ်းများအောက်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, သင့်ရဲ့ငွေကြေးနှင့်အန္တရာယ်များကို minimize ကိုကူညီ.
သင့်၏သင် purchasing စဉ်းစားနေပါတယ်တစ်အသုံးပြုသောက auto အပေါ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် check လုပ်ထားခံရဖို့သောအရာတို့ကိုတစည်းရှိပါတယ်. ယာဉ်ကျော်ကြည့်ရှုပါ, ဒါကြောင့်တာယာလိုအပ်ပါသလဲ? သငျသညျအောက်မြေပြင်ပေါ်မှာအစက်အပြောက်ကရေနံကိုမြင်လျှင်နေကြတယ်? test ကကားကိုမောင်း, သင်ဘရိတ်ကိုလျှောက်ထားသည့်အခါ, တစ်ဖက်ရန်ကားတစ်စီးဆွဲဒါမှမဟုတ်အခြားပါဘူး? သင်တို့သည်ဤအမှုအရာကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တခြားသူတွေလည်းမထားဘူးဆိုရင်ဒါဟာသင်တစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာကံဇာတာကုန်ကျနိုင်ပါ. သင်ကိုယ်တိုင်ပြုနိုင်သည်ကြောင်းကိုသင်၏အသုံးပြုသောကားတစ်စီးစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအတွက်စဉ်းစားရန်အရေးအပါဆုံးအမှုအရာတစ်ခုမှာယာဉ်သမိုင်းကိုစစျဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
တစ်ဦး Pre-ပိုင်ဆိုင်သောကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ထရပ်ကားကိုဝယ်ယူသင်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးအများဆုံးကားတစ်စီးအရောင်းထံမှဝယ်ယူရန်ရှိမရှိမျှမခြားနားသည်, သင်တစ်ဦးအရောင်းအနေဖြင့်ကားတစ်စီးဘို့ကပိုပေးဆောင်စေခြင်းငှါအချက်ကို မှလွဲ.. တပတ်ရစ်ကားကိုကုန်သည်တွေများသောအားဖြင့်ကသူတို့နည်းပညာရှင်တစ်ဦးကကိုသုံးခဲ့ကြ အသုံးအများဆုံးကားတစ်စီးစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း လေလံပွဲမှာဝယ်ယူခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်အတွက်ကုန်သွယ်သောကားများစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စစျဆေးဖို့, ကားကသူတို့ရဲ့တွေအများကြီးပေါ်သို့မဟုတ်မရောင်းချနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရန်. အတွက်ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံမှာရှိတဲ့ Junk ဖြစ်ကြ၏သောသူအချို့ကားများလေလံတင်ရောင်းချလိမ့်မည်, အချို့ကုန်သည်တွေအများကြီးပေါ်ရောင်းစားခံရလိမ့်မည်. ထိုအဟုတ်ကဲ့, ပြဿနာများနှင့်စက်မှုပြဿနာများရှိသည်သောအပင်ကားကိုအရောင်းရဲ့တွေအများကြီးပေါ်ရောင်းစားခံရလိမ့်မည်နှင့်သင်ပြဿနာတွေရှိပါတယ်သောသူတို့သည်လည်းထိုကားများထဲကတစ်ခုကိုဝယ်ယူတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ,. Ask the dealer to show youavehicle condition report that they have preformed on the vehicle, သူတို့သည်သင့်ကိုဝယ်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသောမော်တော်ယာဉ်များအတွက်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီတစ်ခုသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်အခွအေနေအစီရင်ခံစာ.
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကရောင်းဖို့တပတ်ရစ်ကားများ (ပိုင်ရှင်ကရောင်း) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယာဉ်စနစ်တကျပိုင်ရှင်အားဖြင့်စောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးသောအတွေး၏အလားအလာရှိသောဝယ်လက်ရန်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်, သူတို့ကအသုံးအများဆုံးကားတစ်စီးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကရောင်းချလျက်ရှိသောကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုင်ရှင်ကနေတိုက်ရိုက်ဝယ်လျှင်သူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်ချိုရနိုင်ကြောင်း. မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်သူတို့ကကားကိုရောင်းချကြောင်းပြည်သူ့တစ်ဦးအရောင်းရှိကြောင်းကုန်ကျစရိတ်သားအပေါင်းတို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ဤသည်မှာပိုင်ရှင်များရောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းအသုံးပြုသောကားများတစ်ဦးကိုအသုံးပြုတဲ့ကားအရောင်းမှာအလားတူကားတစ်စီးထက်တပြင်လုံးကိုအများကြီးလျော့နည်းကုန်ကျရန်ခွင့်ပြုသည်.
ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီကနေကိုဝယ်ယူအ​​နည်းငယ်ပိုအန္တရာယ်များဖြစ်နိုငျသျောလညျး. You need to be concerned with whether or not the odometer has been tampered with. And with an private seller andadealership you need to be concerned whether or not the vehicle has been inabad accident or not. ထိုအခါပုဂ္ဂလိကရောင်းချသူနှင့်အတူ, သူတို့ကယ့်မော်တော်ယာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူး (ကားကိုအခိုးခံရ)?
သငျသညျအထကျကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ပြုနိုင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးအမှုအရာတစ်ခုမှာအွန်လိုင်းသွားနှင့်အွန်လိုင်းယာဉ်ကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်လက်ကမြင်းဖြစ်နိုင်သော odometer ရန်သင့်အားသတိပေးကူညီပေးပါမည်, အဓိကကျသည့်ယာဉ်မတော်တဆမှုများနှင့်မော်တော်ယာဉ်အခိုးခံရသို့မဟုတ်မပြုလုပ်လျှင်.
နောက်ဆုံးတော့, သင်မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူနိုင််ရှေ့တော်၌ပြုရပါမည်တစ်ချက်ကိုသင်မော်တော်ယာဉ်စက်ပြင်သင့်ရဲ့ထွက် check လုပ်ထားကြပါပြီနိုင်လျှင်မေးဖို့ပါပဲ. မျှော်လင့်နေသင်ယုံကြည်ကိုးစားနေတဲ့စက်ပြင်ဆရာရှိသည်နှင့်တစ်ကြိမ်ကျော်ယာဉ်ကောင်းတစ်ဦးပေးမည်ဟုဆိုသည့်အလားအလာပြဿနာတွေကိုသင်သတိပေးပါလိမ့်မယ်.
Stay ကြောင့်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး, ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ကြောင့်ကို update နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့သင်ပံ့ပိုးလိမ့်မည်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ site ကိုမှဖမ်းယူနားဆင်.
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုကားတစ်စီး purchasing သောအခါအဘို့အကွညျ့ဖို့အရာများအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေးသည်တွေ့ရှိရသည်ကြီးစွာသောဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည် –